तीज बहस : उपादेयता र वैचारिकीमै घनीभूत प्रश्न
काठमाडौँ । आज देशैभर तीज मनाइँदैछ । हिन्दू नारीहरूको महान् चाडको रुपमा यसलाई सदियौंदेखि मनाइँदै आइराखिएको हो । यद्यपि तीजको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पाटोलाई लिएर यसको महानतामाथि प्रश्नहरू पनि निरन्तर उठ्दै आइराखेको छ ।
आदर्श के लाई भन्ने भन्ने कुरो छोटकरीमा भन्नु पर्दा आदर्श त्यहि हो जसले आफूलाई कुनै पनि काम अथवा कुरा गर्न प्रेरित गर्दछ । आ–आफ्नो उद्धेश्य अनुसार आदर्श फरक–फरक हुन सक्दछन् ।
जँड्याहाको डायरी !
यो रक्सीको महिमा अपरम्पार छ मेरा लागि ! मैले झन्डै साढे चार बर्षमा थोपो पनि सुँघिन ! म जाँडरक्सी भएतिर हम्मेसी बाटो पनि पार्दिन । साथीभाई इष्टमित्रका
नखोजिएको, नबुझिएको सृष्टि संरचना
पश्चिमाहरुले निकै चाखपूर्ण रुपमा हिन्दुग्रन्थका बारेमा खोजी गरिरहेका छन् । यी ग्रन्थका विषयमा तुलनात्मक रुपमा बढी जानकार हामी हुँदाहुँदै पनि त्यसको वास्तविकताको खोजीमा टाढा छौ र जान्ने चेष्टासम्म गरेका छैनौ । बरु, ग्रन्थमा उल्लेख भएका कुराको आलोचना गरेर बसेका छौ । कुनै पनि विषयमा आलोचना गर्न जति सजिलो छ, त्यसको गहिराईमा पुगेर बुझ्न त्यत्तिकै कठिन पनि छ ।
यसरी बुझौ हिन्दु धर्मलाई
हिन्दु एक सनातन धर्म हो । सृष्टिको उदयकालदेखि नै प्राकृतिक शक्तिमा विश्वास राखि सदाचार पद्धतीको आधारमा अवलम्बन गरिदैं आएको आस्था हुनाले यसलाई सनातन धर्म भनिएको हो ।
“विश्वविद्यालयले आफ्नो उपकुलपति र प्राध्यापक आफैँ नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाट नियुक्ति हुने प्रणाली नियन्त्रणमुखी हो । यसले दलीय हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्दैन ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इञ्जिनीयरिङ सङ्कायका पूर्वडीन प्रा डा राजेन्द्रध्वज जोशीले उच्चशिक्षा नीतिमा परिवर्तनको औचित्य दर्शाउँदै भने, “विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रणाली राखिरहन आवश्यक छैन । कलेजहरु आफैँले पाठ्यक्रम लागू गरेर परीक्षा लिन सक्नुपर्छ । शुल्क पनि बजारले तय गरेअनुसार लागू हुन सक्छ ।”
एजेण्डा विहिन प्रतिपक्ष
अमेरिकामा डरलाग्दो गोलीकाण्डः बन्दुक सिर्जित हिंसाबाट एकै वर्षमा ४० हजारको मृत्यु
सुन्दा पत्यार लाग्दैन, तर अमेरिकामा एकै वर्षमा बन्दुकसँग सम्बन्धित हिंसाका कारण सन् २०१८ मा ४० हजारको मृत्यु भएको थियो । अमेरिकामा विद्यालय, कलेज, चलचित्र घर र अन्य सार्वजनिक स्थल एवं कार्यक्रममा जथाभावी गोली चलाएर हुने हत्या हिंसाका घटना नियमित झैं हुन थालेका छन् । यी घटनाहरुमा कमी आउनुको साटो बढ्दै गएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
'कश्मीर एउटा तालामा बन्द छ, बाँकी भारतलाई मतलब छैन'
कश्मीर एउटा तालामा बन्द भएको छ । यतिबेला कश्मीरको कुनै खबर छैन । बाँकी भारतमा कश्मीरलाई लिएर उत्सव छाएको छ । कश्मीरको हालतसँग बाँकी भारतलाई मतलब छैन । एकको ढोका बन्द गरिएको छ । अर्कोले ढोका बन्द गरेका छन् ।